Waa Kuma Xiddiga Manchester United U Sheegtay Inuu Shandaddiisa Xidh-xidho Xilli Ay Saxeexyo Cusub Sugayaan - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaWaa Kuma Xiddiga Manchester United U Sheegtay Inuu Shandaddiisa Xidh-xidho Xilli Ay Saxeexyo Cusub Sugayaan
Waa Kuma Xiddiga Manchester United U Sheegtay Inuu Shandaddiisa Xidh-xidho Xilli Ay Saxeexyo Cusub Sugayaan
July 16, 2021 Abdiwahab Ahmed Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 1
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa ku wargelisay ku wargelisay mid ka mid ah xiddigaheeda mustaqbalka fiican leh, in aanu meelna kaga jirin qorshaha tababare Ole Gunnar Solskjaer ee xilli ciyaareedka dhowaanta bilaabmaya, sidaas darteedna uu shandaddiisa xidh-xidho oo uu isku diyaariyo bixitaan.
Manchester United oo usbuucan si rasmi ah ula soo saxeexatay garabka weerarka England ee Jadon Sancho oo ay kala soo wareegtay Borussia Dortmund, waxa kale oo ay wada-hadallo meel fiican maraya kula jirtaa Real Madrid oo ay kala soo wareegayso difaaca reer France ee Raphael Varane oo ay hore ula gaadhay heshiis shaqsi ah.
Sidoo kale, waxay Manchester United rajaynaysaa in maalmaha soo socda ay gacanta ku dhigi doonto difaaca reer England ee Kierran Trippier oo u ciyaara Atletico Madrid, kaas oo ku cadaadinaya naadigiisa in loo ogolaado inuu tago Manchester United, iibkiisana la aqbalo.
Xilli saddexdan ciyaartoy midkood ay xaqiijisatay, labada kalena la filayo in toddobaad gudihii ay ku yimaaddaan Old Trafford, Manchester United ayaa meesha ka saaraysa ciyaartoyda ay boosasku k buuxsameen ee aan waliba fursaha helaynin, kuwaas oo horeba kaydka ugu jiray ka hor intii aan la samaynin saxeexyadan.
Difaaca reer France ee Axel Tuanzebe ayaa la sheegay, in Manchester United ay u sheegtay inaanu ku jirin qorshaha Solskjaer ee xilli ciyaareedkan, sidaas darteedna uu ka tegayo Old Trafford, isagoo ku bixi doona qaab amaah ah.
Warka ayaa intaa ku daray, in Tuanzebe uu doonayo boos uu si joogto ah uga ciyaaro, sidaas darteedna uu ogolaaday inuu heshiis amaah ah oo sannad ah dibedda ugaga baxo kooxda uu da’yarteeda kasoo baxay ee Manchester United.
War heedhe cawaan yahay wiilkan mustaqbal buu uleeyahy manchertr ee sanad khibrad uu ku soo helo bay udirayaan. Ee waa laga baciyay ha dhihi calaamiin yahay